Chrome OS yatove inotsigira chaiyo nzvimbo munzvimbo yayo yazvino vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Ini ndinofunga kuchave nevashoma vashandisi veLinux vasingazive kuti ndeapi chaiwo madhesiki. Seva yakavaona kekutanga muUbuntu 6.06 uye zvakakodzera kuyeuka kuti yakabva kune imwe ichienda kune imwe necube mhedzisiro ye CompizFusion. Nhasi ndichiri kuzvishandisa kupatsanura mamwe mahwindo, senge kubasa uye pasocial network. Ichi chinhu chinogona kuitwa mu Chrome OS 78, yazvino kuvandudza kuGoogle desktop desktop system.
Uku kunonoka kuiswa kune Chrome OS kushamisika uye kunorega kushamisika. Kune rimwe divi, isu tiri kutaura nezve basa rave riri padesktop kwemakore, kunyangwe muWindows. Kune rimwe divi, Google's desktop operating system iri shoma kwazvo system, zvakanyanya kunge software yemapiritsi pane emakomputa. Chero zvazvingaitika, tinogona kutoronga mabasa edu mu chaiwo desktop, uye isu tinogona kuzviita nenzira inoyeuchidza macOS.
Chrome OS 78 chaiwo madhesiki anotibatsira kuronga mabasa edu
Iyo nyowani chaiyo yematafura esarudzo ichaonekwa nekukurumidza patino gadziridza kuChannel OS 78. Kuti uvaone, unofanirwa vhura multitasking uye tinya bhatani idzva iyo inoonekwa kumusoro kurudyi nemavara «New Desktop». Kana tangomiswa, tinogona kudhonza windows kuenda kunzvimbo nyowani dzekushanda.
Zvimwe zvinhu zvitsva mu Chrome OS 78 zvinosanganisira:
Dzvanya-kufona, chinhu chinobvumidza vashandisi vefoni veApple kuti vafone nekukanya-kurudyi panhamba yefoni inoonekwa pane Chromebook.
Mikana yekudhinda nenzira yakapusa uye kusevha mapurinda edu atinoda.
Bhatani idzva mumenu kuti ubude kunze, dzima komputa kana kukiya iyo kutumira mazano.
Chrome OS 78 yakaburitswa zviri pamutemo nezuro, saka inofanira kukurumidza kuratidza seyakagadziridzwa pane zvese zvishandiso zvinotsigirwa. Une ruzivo rwese nezve kuvhurwa uku Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo yazvino vhezheni yeChannel OS yatove kutsigira chaiwo madhesiki